How is the Joint Peace Fund held accountable?: An interview with DFID conflict adviser Steve Ainswor
Forum: Joint Peace Fund (DFID မှပံ့ပုိုးပေးသည့်) အနေဖြင့် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရာတွင် မည်ကဲ့သုို့ တာဝန်ခံမှု ရှိပါသနည်း။ (see English below)
Steve: Joint Peace Fund (ပူးပေါင်းငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေ) ကို ရန်ပုံငွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ “ပါးနပ်အမြှော်အမြင်ရှိတဲ့အစုအဖွဲ့” (Intelligent Secretariat) အနေနဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပုိုင်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်း စီမံကိန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ ပဋိပက္ခတုံ့ပြန်သက်ရောက်မှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုပုိုင်းတွေမှာပါ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။
ပဋိပက္ခဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံများစွာရှိသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဆိုပြုလွှာတွေကောင်းကောင်းရေးနိုင်ပြီး အင်္ဂလိပ်စ ကားကောင်းကောင်း ပြောနိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကုိုပဲ ရန်ပုံငွေပေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အလှူရှင်အ ဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ရန်ပုံငွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေကျမဟုတ်ပေမယ့် အောက်ခြေအဆင့်မှာ တကယ်လည်ပတ်နေတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အခြေခံကျကျ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကုို ထောက်ပံ့ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။
၀န်ထမ်းအများစုအနေနဲ့လည်း မြန်မာပြည်တွင်းပဋိပက္ခသက်ရောက်တဲ့ဒေသတွေက ဒေသခံအဖွဲ့တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်တဲ့ အတွေ့အကြုံရှိသူတွေ ဖြစ်တာကြောင့် အကျိုးပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတွေကုို သိရှိပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်မှု သဘောသဘာဝကိုလည်း နားလည်ပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာက ၀န်ထမ်းတွေ ရောနှော လုပ်ကုိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Forum: JPF ရဲ့ တာဝန်ခံမှုက အဖွဲ့အစည်းရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာရော ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိပါသလဲ။
Joint Peace Fund ရဲ့ Joint ဆိုတဲ့စကားလုံးက ပဋိပက္ခအတွင်းမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ အကျိုးပါဝင်ဆောင်ရွက် သူအားလုံးရဲ့ ပူးပေါင်းရှေးရှုလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ JPF ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံ ရည်ရွယ် ချက်မှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူတွေရော အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ လူထုကုိုပါ ပူးပေါင်းတာဝန်ခံရမယ်လို့ ပါရှိပါတယ်။
ဒီအုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံအတိအကျက ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ အစိုးရနဲ့ ရော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ ပါ နောက်ဆုံးသဘောတူညီမှုရယူတဲ့ အခြေအနေ မရောက်သေးပေမယ့် နောက်ဆုံးအ ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံက ဘယ်လိုပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ် ပူးပေါင်းတာဝန်ခံမှုဆိုတဲ့ စံနှုန်းကိုတော့ ထိန်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးနဲ့ အလုပ်ဖြစ်မယ့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာက တကယ်တမ်းတော့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်ခဲတယ် လို့ပြောတာက ဒါကိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကုိုသေချာမှန်ကန်အောင် လုပ်ဖို့ အရေးကြီး ပါတယ်။ ဒါကခက်ခဲတယ်၊ ရေရှည်လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ အဲဒီနောက်မှာအဆင်ပြေသွားမှာမို့ မှန်ကန်အောင်လုပ်ဖို့က ပုိုအရေးကြီးပါတယ်။
ဒီတာဝန်ခံစိတ်က အခြေခံကျပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က တစ်ဖက် သုို့မဟုတ် အခြားတစ်ဖက်ကို အလေးသာ နေတယ်လို့ အမြင်ခံရရင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဘယ်လိုဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ် ကျွန်တော်တို့မှာ ကုိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးသဘောထား ရှိနေတယ်လို့ အမြင်ခံရရင် ဒါက ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းချက်ကုိုရော၊ JPFကုိုယ်တိုင်ကုိုပါ ဖျက်ဆီးပစ်တာဖြစ်ပြီး အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားခံရမှုကိုပါ ထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခက်ခဲဆုံးကိစ္စတစ်ခုက အလှူရှင်တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအပေါ်မှာ လူတွေအနေနဲ့ ကြိုတင်မှန်းဆ ထားပြီးသား အတွေးတွေရှိကြတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကုိုပံ့ပုိုးတဲ့နေရာမှာ အလှူရှင်တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာတွေလဲပေါ့။ ပြီးတော့ အဲလိုအယူအဆတွေကို ပြောင်းဖို့ကလဲ ခက်ခဲပါတယ်။
ဒီလိုသံသယမကင်းတဲ့သူတွေ၊ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မယုံကြည် လက်မခံတဲ့သူတွေကတော့ ရှိနေမှာပဲ။ ဒါတွေကုို တွေ့ကြုံပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကုို ပံ့ပုိုးတဲ့နေရာမှာ တတ်နိုင်သမျု အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမှာပဲ။
ဒီမူဝါဒတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံတွေ၊ မျှတမှုတွေကို ပြောနေတာကတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒါတွေကို လက်တွေ့ ကျင့်သုံးတာက တစ်ခြားတစ်ခုမို့ အပြောနဲ့အလုပ်ညီအောင် ကိုယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စီမံကိန်းတွေကုိုလည်း ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ အတိုင်းကောင်းမွန်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။
Forum: In practice, how is the Joint Peace Fund (which DFID supports) held accountable?
Part of the design of the Joint Peace Fund is having an “intelligent secretariat” that drives the fund. The staff in the secretariat are experts in their field, not just in running programs but experts in conflict sensitivity and peacebuilding.
They have experience in working with implementing partners and civil society organisations in conflict contexts. It is not just about funding those organisations who can write good proposals, or who can speak English, but about getting to the fantastic grass roots civil society organisations that operate on the ground, who perhaps are not used to working with multi-donor funds.
Many of the staff have experience of working with very local partners in conflict-affected areas of Myanmar, they know the stakeholders and understand the power dynamics. They areamixture of international and local Myanmar staff.
Forum: And how is the accountability of JPF reflected in its governance structure?
Well the ‘joint’ in the joint peace fund refers to joint initiatives by the stakeholders in the conflict.
The concept of the governance structures of the JPF was that there would be also be joint accountability to stakeholders in the peace process, but also to civil society and communities.
We haven’t yet come toafinal agreement with the government and ethnic armed organisations around what that exact governance structure will look like, but the principle of joint accountability will remain, whatever form the final structures will take.
It is really difficult to findastructure that will work for all. But just because it is difficult, it doesn’t mean we shouldn’t do it. It is important to get it right. If it is difficult and it takesalong term then that is fine, it is better to get it right.
That commitment is fundamental. If we are seen to be favouring one side or another, if we are seen to have our own political agenda of what the peace process should look like we will be damaging the peace efforts, the JPF itself, and damaging the credibility of donors.
One of the most difficult things is that people have preconceived ideas about what donor intentions are - what donors’ intentions are for supportingapeace process in the country, and these ideas can be difficult to shift.
There are always going to be sceptics and there are always going to be those who are not receiving or believing those messages and we just have to live with that and continue to make sure that we are as good as we can possibly be in supporting peace.
It is one thing to talk about these principles and governance structures and equitability, but it is another to actually practice them so that you are as good as your word so you are implementing your programs inaway that exemplifies these principles.